Fanafihana mitam-piadiana avokoa no nahavoarohirohy azy ireo tamin izany. Tamin’ny alahady 7 jolay, raha nisava trano ahiahiana ho mpandray entana halatra teo Ambaniatsinanana, kaominina Ankadinondry izay nahazoana alalana avy amin’ny fitsarana ao Tsiroanomandidy ny borigadin’ny zandary Ankadinondry no nifanehitra tamin’izy roalahy ireo tamin’ny 6 ora maraina izay nilanja sakaosy. Somary kaodikaody izy ireo vao nahatsikaritra ireo mpitandro filaminana ary saika hitsoaka saingy voahodidin’ny zandary maro.
Rehefa nosavaina dia nahitana basy mahery vaika kalachnikov sy basy poleta vita gasy iray miaraka amin’ny bala 7.62mm iray sy bala 9mm iray. Nandritra ny famotorana, nilaza izy ireo fa efa nahavita fanafihana mitam-piadiana miisa dimy tamin’ity taona ity raha nikasa hanafika tokantrano iray mpanao hotely teo Ankadinondry ny harivan’io. Efa natolotra ny fitsarana izy roalahy ireo ny zoma 12 jolay teo ary samy voatazona vonjimaika ao amin’ny fonjan’i Tsiroanomandidy miandry ny fitsarana azy. Mbola karohina ireo namany.